ဘေဘီလေးတွေရဲ့ခြေဖ၀ါးလို နူးညံ့ချောမွတ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းအလွယ်လေးတွေ… – Trend.com.mm
ဘေဘီလေးတွေရဲ့ခြေဖ၀ါးလို နူးညံ့ချောမွတ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းအလွယ်လေးတွေ…
Posted on July 2, 2018 November 20, 2018 by Noel
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခြေဖ၀ါးဆိုတာ အမြဲဖြူနုမနေရင်တောင် ကြမ်းကြမ်းကြီးဖြစ်မနေသင့်ပါနော်။ ကလေးဘ၀တုန်းက ခြေဖ၀ါးလေးက ဖြူဥနေသလောက်အရွယ်ရောက်လာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရေပြားခြောက်သွေ့တာမျိုး၊ခြေဖနောင့်ကွဲအက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း လူမမြင်ဘူးဆိုပြီးတော်တန်ရုံပေါ့ပေါ့ပဲသဘောထားမိကြတယ်ဟုတ်! အဲ့ဒီလိုပေါ့ပေါ့နေတာ မကောင်းပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ခြေဖ၀ါးက ဖြူဥမနေရင်တောင် နူးညံ့ပြီးသန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့ခြေဖ၀ါးလေး၊ လှပတဲ့ခြေဖ၀ါးလေးဖြစ်နေသင့်ပါတယ်။ဒီလိုခြေဖ၀ါးလေးဖြူနုသန့်ရှင်းနေစေဖို့ ငွေကြေးအကုန်အကျတွေအများကြီးခံစရာမလိုပါဘူး။အိမ်မှာပဲ အလွယ်တကူလုပ်လို့ ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေရှိနေပါပြီ။တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါလောက်ပဲ အချိန်ပေးပြီးလုပ်ပေးရုံနဲ့ သန့်ရှင်းပြီးလှပတဲ့ခြေဖ၀ါးလေး၊နူးညံ့တဲ့ခြေဖ၀ါးလေးရလာနိုင်ပါတယ်။
အိမ်မှာ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို အလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက အလှအပအတွက်တော့ မရှိမဖြစ်အသုံးဝင်ပါတယ်နော်။ဒီလိုမုန့်ဖုတ်ဆိုဒါဟာခြေဖ၀ါးမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကို အလွယ်တကူဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါထမင်းစားဇွန်းသုံးဇွန်းနဲ့ရေအနည်းငယ်ရောစပ်ပါ။ပြီးရင် ခြေထောက်ကို အဲ့ဒီခွက်ထဲမှာစိမ်ပြီး ခြေဖ၀ါးတွေကိုနှိပ်နယ်ပေးပါ။ ခြေချောင်းကြားတွေအစ သေချာပွတ်တိုက်နှိပ်နယ်ပေးပါ။၁၀မိနစ်လောက်
စိမ်ပြီးသန့်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ရေခပ်နွေးနွေးလေးနဲ့အဆုံးပိတ်ဆေးချပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းကရင်မ်လေးကိုသေချာလိမ်းပေးထားပါ။ဒါဆိုရင် ခြေထောက်
ပန်းသီးအရက်ရှာလကာရည်ကလည်း အလှအပရေးရာအတွက်အများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်။ လိုအပ်တာကတော့ ပန်းသီးအရက်ရှာလကာရည်ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းကို ရေခပ်နွေးနွေးနဲ့ရောစပ်ပါ။ခြေထောက်စိမ်လို့ရရုံအနေတော်လောက်ပေါ့။ပြီးရင် အဲ့ဒီခွက်ထဲမှာ ခြေထောက်ကို ၁၅မိနစ်လောက်စိမ်ထားပါ။စိမ်ပြီးရင်တော့ ခြေဖ၀ါးကိုခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပေးပါ။အားလုံးပြီးရင် အစိုဓာတ်ထိန်းကရင်မ်လေးလိမ်းပေးထားပါ။
အလှအပအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာကတော့သံလွင်ဆီပါပဲ။သံလွင်ဆီကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။သဘာဝအစိုဓာတ်ထိန်းကရင်မ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သံလွင်ဆီကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ အိပ်ရာမ၀င်ခင်ခြေဖ၀ါးကိုလိမ်းလိုက်ပါ။ပြီးရင်ခြေအိတ်စွပ်ထားပါ။ အချိန်ပိုရင်တော့သံလွင်ဆီတွေစိမ့်ဝင်သွားအောင် ခြေဖ၀ါးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနှိပ်နယ် ပေးပါ။မနက်နိုးရင်တော့ ခြေဖ၀ါးလေးကနူးညံ့အိစက်နေတာကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
ပျားရည်က အလှအပတွေအတွက် ဘုရင်တစ်ဆူလိုပဲအသုံးဝင်ပါတယ်။ပျားရည်လောက် ကောင်းတဲ့သဘာဝအလှဆီ၊သဘာဝအလှအပထိန်းသိမ်းနည်းမရှိတော့ပါဘူး။ ပျားရည်ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုရင် သကြားညိုခွက်လေးပုံတစ်ပုံစာ၊အုန်းဆီစားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း၊ပျားရည် ၂ဇွန်းကိုရောစပ်ပြီး ခြေဖ၀ါးတစ်ခွင်ညင်သာစွာပွတ်လိမ်းပေးရုံပါပဲ။၁၅မိနစ်လောက်ထားပြီးရင် ရေနဲ့သေချာဆေးကြောပြီး ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်လိုက်ပါ။အားလုံးပြီးရင်တော့ အစိုဓာတ်ထိန်း
ငှက်ပျောသီးက ခြေဖ၀ါးကိုနူးညံ့ဖြူနုစေတယ်ဆိုတာ ယုံရဲ့လား။တကယ်ပါ ငှက်ပျောသီးက ခြေဖ၀ါးလေးအတွက်အရမ်းအကျိုးပြုပါတယ်။ငှက်ပျောသီးမှာပါဝင်တဲ့Amino acid နဲ့ဗီတာမင်ဓာတ်တွေက အသားအရည်ကိုနူးညံ့ချောမွတ်စေပါတယ်။ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုရင် ငှက်ပျောသီးမှည့်နှစ်လုံးကိုကြိတ်ခြေပြီးခြေဖ၀ါးမှာ မိနစ် ၂၀လောက်ကပ်ထား လိမ်းထားပေးရုံပါပဲ။ပြီးရင် ကြက်သီးနွေးရေလေးနဲ့ဆေးကြောပေးပါ။ခြောက်သွေ့တာတွေကိုလည်း ပြန်ပြီးစိုပြည်လာစေပါတယ်။
ဒီနည်းလေးတွေကို အားလပ်ရက်တွေမှာလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးခြေထောက်ကို စိမ်ထား၊နှိပ်ထားပြီးရင် ခဏလောက်တော့ငြိမ်ငြိမ်နေ ဖို့လိုပါတယ်။ ခုပဲ ခြေထောက်လေးကိုနူးညံ့အောင်လုပ်ထားပြီးခုပဲအပြင်ထသွားနေရင်ခြေထောက်လေးမှာနားချိန်မရှိတော့ပဲနေပါလိမ့်မယ်။ခြေထောက်လေးလှပနူးညံ့ချင်တယ်ဆိုရင် အားလပ်ရက်လေးမှာ အကျိုးရှိရှိအသုံးချဖို့ မမေ့ပါနဲ့ 😎
မိနျးကလေးတှရေဲ့ ခွဖေဝါးဆိုတာ အမွဲဖွူနုမနရေငျတောငျ ကွမျးကွမျးကွီးဖွဈမနသေငျ့ပါနျော။ ကလေးဘဝတုနျးက ခွဖေဝါးလေးက ဖွူဥနသေလောကျအရှယျရောကျလာတော့တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အရပွေားခွောကျသှတေ့ာမြိုး၊ခွဖေနောငျ့ကှဲအကျတာမြိုးတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။ဒါပမေဲ့လညျး လူမမွငျဘူးဆိုပွီးတျောတနျရုံပေါ့ပေါ့ပဲသဘောထားမိကွတယျဟုတျ! အဲ့ဒီလိုပေါ့ပေါ့နတော မကောငျးပါဘူး။ကိုယျ့ရဲ့ခွဖေဝါးက ဖွူဥမနရေငျတောငျ နူးညံ့ပွီးသနျ့ရှငျးသပျရပျတဲ့ခွဖေဝါးလေး၊ လှပတဲ့ခွဖေဝါးလေးဖွဈနသေငျ့ပါတယျ။ဒီလိုခွဖေဝါးလေးဖွူနုသနျ့ရှငျးနစေဖေို့ ငှကွေေးအကုနျအကတြှအေမြားကွီးခံစရာမလိုပါဘူး။အိမျမှာပဲ အလှယျတကူလုပျလို့ ရတဲ့နညျးလမျးလေးတှရှေိနပေါပွီ။တဈပတျကိုတဈခါလောကျပဲ အခြိနျပေးပွီးလုပျပေးရုံနဲ့ သနျ့ရှငျးပွီးလှပတဲ့ခွဖေဝါးလေး၊နူးညံ့တဲ့ခွဖေဝါးလေးရလာနိုငျပါတယျ။
အိမျမှာ မုနျ့ဖုတျဆိုဒါကို အလှယျတကူမွငျတှနေို့ငျပါတယျ။မုနျ့ဖုတျဆိုဒါက အလှအပအတှကျတော့ မရှိမဖွဈအသုံးဝငျပါတယျနျော။ဒီလိုမုနျ့ဖုတျဆိုဒါဟာခွဖေဝါးမှာရှိတဲ့အညဈအကွေးတှကေို အလှယျတကူဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျတဲ့။မုနျ့ဖုတျဆိုဒါထမငျးစားဇှနျးသုံးဇှနျးနဲ့ရအေနညျးငယျရောစပျပါ။ပွီးရငျ ခွထေောကျကို အဲ့ဒီခှကျထဲမှာစိမျပွီး ခွဖေဝါးတှကေိုနှိပျနယျပေးပါ။ ခွခြေောငျးကွားတှအေစ သခြောပှတျတိုကျနှိပျနယျပေးပါ။၁ဝမိနဈလောကျ
စိမျပွီးသနျ့ရှငျးပွီးသှားပွီဆိုရငျတော့ ရခေပျနှေးနှေးလေးနဲ့အဆုံးပိတျဆေးခပြွီး အစိုဓာတျထိနျးကရငျမျလေးကိုသခြောလိမျးပေးထားပါ။ဒါဆိုရငျ ခွထေောကျ
ပနျးသီးအရကျရှာလကာရညျကလညျး အလှအပရေးရာအတှကျအမြားကွီးအသုံးဝငျပါတယျ။ လိုအပျတာကတော့ ပနျးသီးအရကျရှာလကာရညျထမငျးစားဇှနျး ၂ဇှနျးကို ရခေပျနှေးနှေးနဲ့ရောစပျပါ။ခွထေောကျစိမျလို့ရရုံအနတေျောလောကျပေါ့။ပွီးရငျ အဲ့ဒီခှကျထဲမှာ ခွထေောကျကို ၁၅မိနဈလောကျစိမျထားပါ။စိမျပွီးရငျတော့ ခွဖေဝါးကိုခွောကျသှအေ့ောငျ သုတျပေးပါ။အားလုံးပွီးရငျ အစိုဓာတျထိနျးကရငျမျလေးလိမျးပေးထားပါ။
အလှအပအတှကျမရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့အရာကတော့သံလှငျဆီပါပဲ။သံလှငျဆီကခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံး အတှကျအသုံးဝငျပါတယျ။သဘာဝအစိုဓာတျထိနျးကရငျမျလညျးဖွဈပါတယျ။သံလှငျဆီကိုဘယျလိုသုံးရမလဲဆိုတော့ အိပျရာမဝငျခငျခွဖေဝါးကိုလိမျးလိုကျပါ။ပွီးရငျခွအေိတျစှပျထားပါ။ အခြိနျပိုရငျတော့သံလှငျဆီတှစေိမျ့ဝငျသှားအောငျ ခွဖေဝါးကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးနှိပျနယျ ပေးပါ။မနကျနိုးရငျတော့ ခွဖေဝါးလေးကနူးညံ့အိစကျနတောကိုသတိထားမိပါလိမျ့မယျ။
ပြားရညျက အလှအပတှအေတှကျ ဘုရငျတဈဆူလိုပဲအသုံးဝငျပါတယျ။ပြားရညျလောကျ ကောငျးတဲ့သဘာဝအလှဆီ၊သဘာဝအလှအပထိနျးသိမျးနညျးမရှိတော့ပါဘူး။ ပြားရညျကို ဘယျလိုသုံးရမလဲဆိုရငျ သကွားညိုခှကျလေးပုံတဈပုံစာ၊အုနျးဆီစားပှဲတငျဇှနျး ၂ဇှနျး၊ပြားရညျ ၂ဇှနျးကိုရောစပျပွီး ခွဖေဝါးတဈခှငျညငျသာစှာပှတျလိမျးပေးရုံပါပဲ။၁၅မိနဈလောကျထားပွီးရငျ ရနေဲ့သခြောဆေးကွောပွီး ခွောကျသှအေ့ောငျသုတျလိုကျပါ။အားလုံးပွီးရငျတော့ အစိုဓာတျထိနျး
ငှကျပြောသီးက ခွဖေဝါးကိုနူးညံ့ဖွူနုစတေယျဆိုတာ ယုံရဲ့လား။တကယျပါ ငှကျပြောသီးက ခွဖေဝါးလေးအတှကျအရမျးအကြိုးပွုပါတယျ။ငှကျပြောသီးမှာပါဝငျတဲ့Amino acid နဲ့ဗီတာမငျဓာတျတှကေ အသားအရညျကိုနူးညံ့ခြောမှတျစပေါတယျ။ဘယျလိုသုံးရမလဲဆိုရငျ ငှကျပြောသီးမှညျ့နှဈလုံးကိုကွိတျခွပွေီးခွဖေဝါးမှာ မိနဈ ၂ဝလောကျကပျထား လိမျးထားပေးရုံပါပဲ။ပွီးရငျ ကွကျသီးနှေးရလေေးနဲ့ဆေးကွောပေးပါ။ခွောကျသှတေ့ာတှကေိုလညျး ပွနျပွီးစိုပွညျလာစပေါတယျ။
ဒီနညျးလေးတှကေို အားလပျရကျတှမှောလုပျစခေငျြပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုမြိုးခွထေောကျကို စိမျထား၊နှိပျထားပွီးရငျ ခဏလောကျတော့ငွိမျငွိမျနေ ဖို့လိုပါတယျ။ ခုပဲ ခွထေောကျလေးကိုနူးညံ့အောငျလုပျထားပွီးခုပဲအပွငျထသှားနရေငျခွထေောကျလေးမှာနားခြိနျမရှိတော့ပဲနပေါလိမျ့မယျ။ခွထေောကျလေးလှပနူးညံ့ခငျြတယျဆိုရငျ အားလပျရကျလေးမှာ အကြိုးရှိရှိအသုံးခဖြို့ မမပေ့ါနဲ့ 😎
မိုးရာသီမှာ ခြင်တွေဝေးဝေးပြေးစေဖို့ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ပန်းပင်လေးတွေ 🍃